Muuse Suudi yalahow oo cambaareyay Qaramada Midoobay xafiiskeeda barnaamijka horumainta ee Muqdiso.
October 27 2001 at 5:06 PM BAYDHABO PRESS
Ku: - Rondolf Kent Wakiilka Barnaamijyada Horumarinta ee Qaramada middobay Somalia, Nairobi, Kenya
Og: Sarkaalka u qaabilsan nabd-gelyada, Qaramda midoobay
Cc: UNDP muqdisho
Cc: Kofi Annan Xogoyaha Guud ee Qaramada midoobay New york. Dalka Maraykanka 21 October 2001
Ujeeddo:- Cambareyn ka dhan ah Qaramada Midoobay xafiiskeeda barnaamijka horumainta ee Muqdiso.
MUQDISHO 24-10-2001, Waxaanu halkan ku caddeynaynaa Hoggaamiyaasha siyaasadda ee Soomaliya kuna farax sanahay ugana mahad celineynaa Qaramada midoobay hawlgallada taariikhiga ah guud ee ay ka fulusay guud ahaan Soomaliya. Si kasta ha ahaate anagoo tixgelineynaa arrintaasi, annagoo si saraaxad leh ku hadlayna, si xooggan u soo jeedineynaa iyagoo mudan Dulqaad.
Anaaggoo, ah ururka USC/SSA, waxaanu si aad ah u dacweyneynaa qaramada midoobay xafiiskeeda Muqdisho. Ku qanacsanaan la'aatna ugu wayn ee anu dareen sanahay waa xafiiska qaramada midoobay muqdisho, kasoo anu ugu adeegiin mujtamacyada muqdisho si siman uu sameeyo eex iyo caddaalad darro lagu sameeyo bulshada adeegyada loo qabto mujtamaca ku dhaqan gobolka Banaadir.
Xafiiskani wuxuuu caawiyaa keliya kooxda muqdisho xageeda koonfureed oo ay xaq-darro ku haystaan deegaankaasi iyo kooxo lagu tilmaamo kooxda Carta. Iyagoona adeegoodu aysan u fidin dhanka waqooyi ee magaalda muqdisho, Shabellada dhexe iyo degmooyin ka tisan Gobolka gal-gaduud. Kooxda carta awood, deegaan iyo sharciba kuma laha Soomaliya xataa Muqidsho.
Waaxaanu la yaabanay dhanka qaramada midoobay sida ay ugu aqbashay kooxda carta inay buuxiyaan kurisa Qaramada midoobay ee Somalia. Xafiiska Barnaamijyada horumanta ee qaramada midoobay ee muqdisho, wuxuu shaqaaleyaa oo keliya shaqsiyaad, kuwaasoo aanan ka muuqan dhammaan dadka deegaanka iska leh. Iyagoo ixtiraamaya inaysan simin shaqaalahooda.
Shaqaalahoodu waxy joogto u sheegaan warbixinno been iyo kuwo aan sugneenba sida xaaladaha nabad gelyada dhanka aan ka talino. Sidaad xogogaalo ugu tihiin Soomaliya way qayb qayb san tahay, maamulo ayaa jira, gobol walba wuxuu leeyahay maamul u gaar ah iyo hogaan u ixtiraamaan mujtamacooda.
Maamulada ay ka taliso urarka USC/SSA ma aysan soo gaarin wax qabadyadii iyo adeegyada inta ay xaqa ugu lahaayeen dhanka qaramada midoobay Anagoo sheegnyay waxyaabaha kor ku xusan ee sinaansho la'nta iyo eexda wax qabadka qaramada midoobay ee Soomalia. Barnaamijka daryeelka bulshada (SCPP) oo la furay muddo sanad ka hor xafiiskeeda muqdisho, waxay u wax u qabatay oo keliya kooxda Carta, oo ayaagoo aan awood ku leyn Benadir, degmooyinka iyo gobollada soomaliya xaarana ku joogaan iyo gobollada.
Xafiiskani wuxuu hirglinayaa barnaamijyo kala duwan koonfurta muqdisho sida, waxa loogu yeero tababarid police-ka Benadir, kuwo sharciyada, qalabeynta xafiisyada, wacyigelinta maliishiyooyinka, dib-u dhiska waxa loogu yeero xarumihii police-ka. Ma aysan siinin wax fursad ah, wada shaqeyn iyo addeegba meelaha ay ka taliso urarka USC/SSA. Waxaan in badan caddeynay aragtida aan loo dulqaadan karin qaramada midoobay xafiiskeeda aan u sinneen hawl-laheeda ay ka fuliso muqdisho.
Gebagadii, waxaan rajeyneynaa in Qaramda midoobay ay ku shaqeeyso si daacad ah ayna soo celiso kalsoonidii lagu yiqiinay inay ku dhaqmaan sharuuucda u degsan daacadnimada.
Haaji Muuse Suudi Yalahow
Guddoomiyaha HOGGAANKA URURKA USC/SSA